उमेरको भिन्नताकै कारणले यौनेच्छा नभएको महसुस हुन्छ - यौन मनोविज्ञान - साप्ताहिक
प्रश्न : म ६५ वर्षीय पुरुष हुँ । मेरा तीनवटी श्रीमती छन् । विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उनीहरूसँग मेरो विवाह भएको हो । हाल आएर म कान्छी श्रीमतीसँग बस्छु र उनीसँग शारीरिक रूपमा आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको र सम्बन्ध राख्न पनि इच्छा नभएको अनुभव हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर मेरो र उनको सम्बन्धमा परेको छ । यही कारणले होला, उनको एक जना पुरुषसँग यौनसम्बन्ध पनि हुँदै आएको कुरा थाहा पाएको छु । हिजोआज हाम्रो दैनिकजस्तो मनमुटाव भैरहन्छ । यस्तो समस्या उमेरको भिन्नताका कारणले आउँछ वा अन्य कारणले ? किनभने धेरैजसो समयमा मलाई उमेरको भिन्नताकै कारणले यौनेच्छा नभएको महसुस हुन्छ । मलाई के भएको हो र यसको समाधान के छ ?
कतिपय अवस्थामा अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखेको खुलासाले एक–अर्काप्रतिको आत्मीयतामा कमी आउँछ र त्यसको सीधै असर यौनसम्बन्धमा पर्छ । हेर्दा सामान्य लागे पनि विभिन्न सोच मनमा आउँछन् । यसरी मनमा कुरा खेलिरहेका बेला तपाईंलाई लाग्न सक्छ, यस्ता कुराले तपाईंको मनोविज्ञानमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ र तपाईंलाई यौनसन्तुष्टि प्राप्त गर्नमा समस्या भएको हुन सक्छ । त्यसैले तपाईंले आफ्ना यस्ता इच्छा, अपेक्षा, बानी तथा आवश्यकताहरूलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी हुन्छ ।
फरक यति मात्र हो कि मानिसहरूले हरेक समय र निर्णयसँगै आफूलाई समायोजन गर्दै लगेका छन् कि छैनन् ? सेक्स मात्र महत्वपूर्ण होइन । यससँग जोडिएका धेरै पक्ष छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एक–अर्कालाई स्वीकार गरिएको छ कि छैन ? भावना साटासाट सेक्सको अभिन्न पक्ष हो । उमेर बढ्ने क्रमसँगै अनुभवबाट फाइदा लिन सकिने सम्भावना हुन्छ । श्रीमान्को उमेर बढ्दै जाने क्रमसँगै सेक्सको नियमित रुटिन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तपाईंकी श्रीमतीले अर्को व्यक्तिसँगको यौनजीवनलाई अघि बढाउँदै हुनुहन्छ भने त्यसले तपार्इंको जीवनमा थप समस्या पैदा गर्छ ।
तपाईंले तेस्री श्रीमतीका रूपमा स्वीकार गरे पनि सामाजिक रुपमा उहाँको स्वीकार्यता छ कि छैन, त्यसले पनि यौनसम्बन्धमा असर पारेको हुन सक्छ । अर्को कुरा, तपाईंका पहिलेका श्रीमतीहरूसँगको यौनसम्बन्ध कस्तो थियो भन्ने कुरामा पनि तुलना गर्न पुगिरहनु पो भएको छ कि ? महत्वपूर्ण कुराचाहिँ के हो भने हरेक व्यक्तिसँगको यौनसम्बन्ध फरक–फरक हुन्छ र फरक किसिमले त्यसलाई रमाइलो बनाउन सकिन्छ । अर्को थाहा पाउनुपर्ने कुरा हार्मोनमा आएको परिवर्तन हो । उमेर बढ्दै जाने क्रममा महिला र पुरुष दुवैमा हार्मोन परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो ।
सकारात्मक सोचले काम गर्ने बानी बसाल्ने, मानसिक तथा शारीरिक अवस्था तन्दुरुस्त अवस्थामा राख्ने, चिन्ता नलिने र आफूलाई अनुकूल बनाउँदै लाने हो भने यौन आनन्दमा कमी नहुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तपाईंको विवाह अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएको भए पनि थप अप्ठ्यारो सिर्जना नगर्न एक–अर्कासँग खुलेर कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ ।